site na nhazi na 20-06-20
2019 Arab Health Dị ka ihe ngosi kachasị na Middle East, yana nnukwu ngosipụta na nnọkọ ụlọ ọrụ, 2019 Arab Health mepere na Jenụwarị 28th na Dubai World Trade Center. Ndị na - ekesa ọgwụ na ahụike na ndị dibịa f ...
Ahụike 2019 opupu CMEF
Oge opupu ihe ubi 2019 Elekere CMEF Na Mee 14th, 81st China International Medical Equipment (Spring) Expo mepere nke ukwuu na Nnukwu Mgbakọ na Ngosi nke Shanghai. Micomme Medical, dị ka mba…
Ka ọnwa nke iri na anọ dị na mkpụrụ ụbọchị iri na anọ n'ọnwa Mee, emere ihe ngosi Ndinye Ahụike Ahụike ụwa (81) nke China (China) na Nnọkọ Mgbakọ na Ngosi nke Shanghai. Micomme Medical, dị ka onye isi mba na akụrụngwa ọgwụ na - abụghị mmụọ na - emetụta mmụọ, wetara ngwaahịa anyị kachasị ọhụrụ na Shanghai ma na - enwu na au ...
Africa Health 2019 Na Mee 28th, Afrịka Ahụike Afrịka 2019 (Ngosi Ego Ndị Ahụike Ahụike South Africa) na Johannesburg. Dika ihe ngosi ndi okacha amara n’uwa n’Afrika, African Health 2019 bu ezigbo uzo ihe eji eme ahia na oru nye ndi n’eto n’Afrika…
MEDICA 2018 Micomme Medical na-eduga gị n'inweta nkà na ụzụ ahụike kachasị na 2018 MEDICA. N’abalị iri na abụọ n’ọnwa Nọvemba, ihe ngosi Ahụike Düsseldorf International Medical Exhibition nke ukwuu (MEDICA 2018)…